बाजुराको पाण्डवगुफा गापामा एमाले विजयी » खबरहरुको एउटै केन्द्र
बाजुराको पाण्डवगुफा गापामा एमाले विजयी
शुक्रबार, असार १६, २०७४ १४:०५ मा प्रकाशित !
बाजुरा, असार १६ गते । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको मत आउन थालेको छ । उत्तरी भेगको पाण्डवगुफा गाउँपालिकामा नेकपा (एमाले) विजयी भएको छ । गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदका उम्मेदवार एमालेका जिल्ला कमिटी अध्यक्ष कालीबहादुर शाही विजयी भएको निर्वाचन अधिकृत प्रकाशराज पौडेलले बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार शाहीले एक हजार ४५१ मत ल्याएर विजयी हुनुभएको हो ।
यसैगरी, उहाँका प्रतिद्वन्द्वी नेकाका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार सुन्दर विष्टले ९८९ मत ल्याउनुभएको हो । गाउँपालिका उपाध्यक्षका एमालेकै ऐना गिरी विजयी भएकी छन् । गिरीले एक हजार ४९० मत ल्याएर विजयी हुनुभएको छ ।
नेकाकी उपाध्यक्ष उम्मेदवार तारा रोकाया (डडाल)ले ९८७ मत पाउनुभएको निर्वाचन अधिकृत पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ । पौडेलले दिएको जानकारीअनुसार नेकपा (एमाले)ले चार वडा जितेको छ भने नेकाले एक र माओवादी केन्द्रले एक वडा जितेको बताइएको छ ।
काँग्रेस नौ, एमाले नौ वडामा विजयी
यसैगरी, स्थानीय तहको निर्वाचनको मतपरिणाम आउने क्रममा जिल्लाका नौ स्थानीय तहमध्ये सात तहको मतपरिणाम मात्र सार्वजनिक भएको छ ।
सञ्चारको पहुँच नभएका कारण स्वामीकार्तिक गाउँपालिका र हिमाली गाउँपालिकाको मतपरिणाम थाहा हुन सकेको छैन । १८ मतदान केन्द्रको मतपरिणामअनुसार नौमा नेपाली काँग्रेस, नौमा नेकपा (एमाले) र एकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले विजयी हासिल गरेका छन् ।
मतपरिणाम आएअनुसार त्रिवेणी नगरपालिका–१ मा नेकाको सिङ्गो टोली विजयी भएको छ । वडाध्यक्षमा नेकाका खम्म दमाईंले २८७ मत ल्याएर विजयी भएका छन् भने उहाँका प्रतिद्वन्द्वी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का मनराजे बुढाले २१९ मत प्राप्त गरेको सहायक निर्वाचन अधिकृत सुरेशराज पन्थीले बताउनुभएको छ ।
यसैगरी, वडा नं ९ मा नेकाको प्यानल विजयी भएको छ । नेकाको वडाध्यक्षमा वीरबहादुर विष्टले ५२८ मतले विजयी भएका छन् । नेकपा एमालेका प्रतिद्वन्द्वी कर्णबहादुर साउदले ४०५ मत प्राप्त गरेका छन् ।
बूढीनन्दा नगरपालिका–१ मा नेकाका नृप खत्रीले ४०५ मत ल्याएर विजयी भएका छन् भने उहाँका प्रतिद्वन्द्वी नेकपा (एमाले)का मानबहादुर कार्कीले ३५२ मत ल्याएका छन् ।
त्यस्तै, पाण्डवगुफा गाउँपालिका–५ मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का वडाध्यक्ष प्रकाश शाही विजयी भएका छन् भने वडा नं ६ मा नेकपा (एमाले)का वडाध्यक्षमा कलकबहादुर विष्ट विजयी भएका छन् ।
दोस्रो चरणको निर्वाचनको मतपरिणाम आउन थालेपछि नेकाले छेडेदह गाउँपालिकाका दुई र नेकपा (एमाले)ले दुई वडा जित्न सफल भएको छ । छेडेदह गाउँपालिका वडा नं १ मा नेकपा (एमाले)का वडाध्यक्ष वीरबहादुर रावलले ६६१ मत ल्याएर विजयी हुनुभएको छ भने उहाँका निकटतम नेकाका टेकबहादुर रोकायाले ३९० मत ल्याउनुभएको छ ।
यसैगरी, वडा नं २ मा नेकाका वडाध्यक्ष मीनबहादुर शाहीले ५७९ मत ल्याएर विजयी भएका छन् भने नेकपा (एमाले)का वडाध्यक्षका उम्मेदवार मानबहादुर बुढाले ३३० मत प्राप्त गर्नुभएको छ । वडा नं ३ मा नेकपा एमालेका वडाध्यक्ष दीपकबहादुर रावतले ३९० मत प्राप्त गरेर विजयी भएका छन् । उहाँका प्रतिद्वन्द्वी नेकपा माओवादी केन्द्रका वडाध्यक्ष दिलबहादुर रावतले २८४ मत ल्याउनुभएको छ ।
वडा नं ४ मा नेकाको प्यानल विजयी भएको छ । वडाध्यक्षमा नेकाका हर्कबहादुर रावतले ६०३ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा (एमाले)का दिल्ली सुनारले २९५ मत ल्याउनुभएको छ ।
बडिमालिका नगरपालिका–१ मा नेकाको प्यानल विजयी भएको छ । वडाध्यक्षका उम्मेदवार रामबहादुर कार्कीले ५०४ मत पाएर विजयी हुनुभएको हो । उहाँका निकटतम नेकपा एमालेका दिलबहादुर विकले २८३ मत ल्याउनुभएको हो ।
यसैगरी, वडा नं २ मा नेकपा (एमाले)का वडाध्यक्षका उम्मेदवार डम्वर महतले २४२ मत ल्याएर विजयी हुनुभएको छ भने नेकाका गोपाल कार्कीले २३६ मत पाउनुभएको छ ।
वडा नं ३ मा नेकपा (एमाले)को सिङ्गो टोली विजयी भएको छ । वडाध्यक्षका उम्मेदवार वीरबहादुर रावलले ३४८ मत ल्याएर विजयी हुनुभएको छ भने नेकाका नन्दलाल खड्काले १४४ मत ल्याउनुभएको हो ।
वडा नं ४ मा पनि नेकपा एमालेको सिङ्गो प्यानल विजयी भएको हो । एमालेका वडाध्यक्ष सुरेन्द्र नाथले १४९ मत पाएर विजयी भएका हुन् । नाथका प्रतिद्वन्द्वी नेकाका सुरेन्द्रबहादुर सिंहले १२० मत ल्याउनुभएको हो ।
वडा नं ५ मा नेकाका सिङ्गो टोली विजयी भएको छ । नेकाका बलबहादुर थापाले २३३ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । थापाका प्रतिद्वन्द्वी नेकपा (एमाले)का देवु साउदले १३२ मत पाएका छन् ।
वडा नं ६ मा नेपाली काँग्रेस विजयी भएको छ । नेकाका वडाध्यक्षका उम्मेदवार कलादेवी बडुवालले ५५४ मत ल्याएर विजयी भएकी छन् भने नेकपा (एमाले)का करे बडुवालले ३७३ मत ल्याउनुभएको हो ।
गौमुल गाउँपालिकामा नेकपा (एमाले)ले नं १, ५ र ६ मा विजयी भएको बताइएको छ । विजयी हुनेको नाम भने खुल्न आएको छैन ।
बडिमालिका–७ मा एमाले र ८ मा नेकाँ
यस्तै, बडिमालिका नगरपालिका–७ मा नेकपा (एमाले)का वडाध्यक्षका उम्मेदवार धर्मराज पाध्यायले ४३३ मत ल्याएर विजयी भएका हुन् भने नेकाका वडाध्यक्षका उम्मेदवार विजयराज पण्डितले ४२९ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
यसैगरी, वडा नं ८ मा नेकाको सिङ्गो प्यानल विजयी भएको छ । वडाध्यक्षका उम्मेदवार प्रकाश रावलले ४८० मत ल्याएर विजयी हुनुभएको हो । रावलका निकटतम नेकपा (एमाले)का दलबहादुर थापाले ४०३ मत ल्याउनुभएको छ ।
PREVIOUS POST Previous post: दङ्गीशरण गाउँपालिका – १ मा एमाले
NEXT POST Next post: इलाम नपा–१२ मा काँग्रेसको प्यानल विजयी भयो
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शुक्रबार, असार १६, २०७४ १४:०५
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शुक्रबार, असार १६, २०७४ १४:०५
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शुक्रबार, असार १६, २०७४ १४:०५
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शुक्रबार, असार १६, २०७४ १४:०५
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शुक्रबार, असार १६, २०७४ १४:०५